Relishing — Steemkr
ကျွန်ုပ်တို့၏ထိန်းငါတို့သားသမီးပြုစုပျိုးထောင်ငှားရမ်းထားအကူအညီနဲ့ထွက်ခွာပါကကျွန်တော် blithely ဂျက်ချွတ်ကဲ့သို့မြည်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထိန်းအကြှနျုပျ၏လေးတွေရက်အနည်းငယ်အဘို့ထိုသူတို့ဂရုစိုက်မည်သူအဘိုးအဘွားရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးငါ့ကိုသတိပေးနေပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်နေ့ဖြစ်၏။ သို့မဟုတ်ညဦးယံ။ ဘိုးဘွားငြူစူခြင်း: သူများသည်အချိန်ကာလကငါ့ကိုထိခိုက်လာသောအခါဖြစ်ကြသည်။ ငါ့ကိုမှားယွင်းတဲ့ရမနေပါနဲ့, ငါတို့ကလေးတွေအဘိုးအဘွားရှိသည်။ တကယ်တော့သူတို့ကိုမချစ်တဲ့သူအဘိုးအဘွား။ ငါ့အဘနှင့်ကျွန်မခင်ပွန်းရဲ့အမေအသက်ရှင်ရကြ၏။ ငါ့အဖေ (ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့သူတို့၏ "Pooh", "Winnie အဆိုပါ ... ") ဖလော်ရီဒါအတွက်, ငါတို့သည်နယူးယောက်မြို့၌ရှိကြ၏။ ထိုသားသည်ငါ့ Judeo-ခရစ်ယာန်လေးတွေမှဟယ်လို / Hanukkah / ချစ်သူများနေ့ / အီစတာကတ်များပို့ပေးအမြဲတမ်းကျနော်တို့ FaceTime အပေါ်ချေါသောအခါဖွကွေား။ သူဟာဖြစ်နိုင်သည်မထားဘဲကျွန်တော်ယူမထားတဲ့, ဖွစျနိုငျသကဲ့သို့ရက်ရက်ရောရောပါပဲ။
goldbloger40 · 3년 전
steemtag26 · 3년 전
@goldbloger, You Have Been Tagged!! Randomly... Ummm... We Would Like To Be Your Friend? Tagging Friends Is Fun! You Can Easily Tag Your Friends.
Quick Introduction To Tagging Your Friends ** Introduction **
New To STEEM, Is Your Reputation Less Than 30, Then Tagging Friends Is Dangerously Low, Send Only Only 0.001 SBD To @STEEMTag With Your Friend's Steemit Post Link In The Memo.